Deg deg:Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo Muqdisho looga wacay. – idalenews.com
Idalenews:Sida ay sheegayaan Xukuumadda Soomaaliya ayaa diyaarad qaas ah u dirtay Guddoomiyaha, taasoo galabta ka soo qaaday magaalada Muqdisho.
Safarkan ayaa yimid, saacado kaddib markii wafdigii Wasiirada ahaa ee Jowhar u tagay xiisada siyaasadeed ee maamulka Hirshabeelle ay dib ugu laabteen magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dalab culus u gudbiyay wasiirada, kuna wargeliyay hadii aysan Xukuumadda taageerin is bedelkan, sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo dooranayaan Madaxweyne, maadaama aqlabiyada ugu badan ee Baarlamaanka uu isku raacay xil ka qaadistii Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle.
Warar ay heshay Jowhar.com ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre uu u yeeray Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle, si uu ugala hadlo xil ka qaadistii lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cosoble oo wali ku doodaya inuu yahay Madaxweynaha sharciga.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa wali ka hadlin xiisada siyaasadeed iyo xil ka qaadistii Cali Cosoble, waxaana lagu wadaa inay war ka soo saarto